कपालमा चायाँ लठ्ठिएर दिक्क हुनुभएको छ ? छुटकारा पाउन यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस् ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कपालमा चायाँ लठ्ठिएर दिक्क हुनुभएको छ ? छुटकारा पाउन यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस् !
काठमाडौँ । व्यक्तिमा चाँयाको समस्या हुन्छ । यसको उपचार गर्नका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरिन्छ । कुनै पनि उपायको वास्तविक कारण नजानी गरिने उपचारले कपाल झनै विगार्ने गर्छ ।चाँयाको मुख्य लक्षण कपाल झर्ने र चिलाउनु हो । यो समस्या कपालमा हुने मृत कोशिकाहरुबाट पैदा हुन्छ । विशेषज्ञका अनुसार यो समस्या ती व्यक्तिहरुलाई धेरै हुन्छ जो कपाललाई सही ढंगले सफा गर्दैनन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
५.नीम र दहीको पेस्ट: नीमको सेवले रगत सफा हुन्छ । तर, दहीमा नीमको पातको पेस्ट बनाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्न कम हुन्छ भने छिट्टै कपाल फुल्ने समस्या पनि कम हुन्छ । साथै, चाँया पनि हराउँछ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
डडेल्धुरामा माइक्रो बस दुर्घटना हुँदा १७ घाइते